Shadowmatic | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Shadowmatic
Shadowmatic APK ကို
Shadowmatic သငျသညျပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်ကိုသက်ဆိုင်ရာ projected မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲမှာမှတ်မိ silhouette ကိုရှာဖွေရန်မီးမောင်းထိုးထဲမှာစိတ္တဇအရာဝတ္ထုလှည့်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးဆုရစိတ်ကူးစိတ်သန်း-လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေတဲ့ပဟေဠိဖြစ်ပါတယ်။
လက်ျာဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင့်ခရီးတွင်သင်သည်များစွာသောမျှော်လင့်မထားတဲ့နှင့်အပြတ်အသတ်မတူညီ silhouette အပေါ်သို့ထိ မိ. လဲကြလိမ့်မည်။
အဆိုပါဂိမ်းအမျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်မှာ, ထူးခြားတဲ့အယူအဆ, လေထုနှင့်တေးဂီတနှင့်အတူအနံ့တစ်ဦးချင်းစီပါရှိပါတယ်။
သငျသညျ 14 enviroments မှာပထမဦးဆုံးအခမဲ့4အဆင့်ဆင့်ပျော်မွေ့လျှင်, သင်ပိုပြီးအေးမြအဆင့်ဆင့်နှင့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုတည်း In-app ကိုဝယ်ယူနှင့်အတူအတူဂိမ်း၏ကျန်သော့ဖွင့်ဖို့ LOVE ပါလိမ့်မယ်။
- 100 ထူးခြားတဲ့ enviroments မှာ 12 အဆင့်ဆင့်ထက်ပို
- က Secondary ရည်ရွယ်ချက်များ
- Nonlinear အဆင့်အထိတိုးတက်မှု
- 3D Parallax အမြင်
- Arcade Mode ကို
"အလှတရား၏အချက်မှရိုးရှင်းသောနှင့်အနုပညာအလုပ်ဖြစ်လာ၏အချက်မှအဆင်းလှသောအစ်မ, ဤသူသည်သင်တို့အတှေ့အကွုံကိုအဆုံးသတ်ချင်မည်မဟုတ်သောကွောငျ့သငျသညျ, အနိုင်ရချင်တယ်မည်မဟုတ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်" - Pocket ဂိမ်းကစားသူ
"whimsical ပဟေဠိများနှင့်စဉ်းစားဟန်ဒီဇိုင်းများ၏အပြည့်အဝ, Shadowmatic တစ်ကြည်နူးဖွယ်နှင့်ဖြစ်မည်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်" - က CNET
" 'စိတ်ကူးကိုမူလ': Shadowmatic အရိပ်ရုပ်သေး၏ရှေးဟောင်းတရုတ်အနုပညာနှင့်အတူကျြမှောကျခတျေအံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်ဖြစ်တယ်" - အဆိုပါဂါးဒီးယန်း
TIME က - "ဒါဟာစိတ်ကို-ကွေးအရိပ်-ရုပ်သေးမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောနဲ့တူရဲ့"
ဝါရှင်တန်ပို့စ် - "ဒီဂိမ်းကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုမှာအနည်းငယ်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားလိုအပ်ပါတယ်"
ဂိမ်းထဲမှာရှိသမျှအခန်းတစ်ခန်းချင်းစီအတွက်ထူးခြားတဲ့လေထုနှင့်ခံစားအထိဖြည့်စွက်, ကိုယ်ပိုင်ဂီတအစီအစဉ်ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါဂီတနားကြပ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိသည် ဖြစ်. , Music ကို Google Play တွင်သီးခြားစီရရှိနိုင်ပါသည်။
Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: @ShadowmaticGame
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကို join: @Shadowmatic
Instagram ကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: @Shadowmatic
Triada စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ 20 နှစ်ကျော်အတူကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်များနှင့်ကာတွန်းရုပ်ရှင်စတူဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ Shadowmatic တစ်ခုစမ်းသပ် In-အိမ်သူအိမ်သား 3D အင်ဂျင်နှင့်အတူ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်အတွေ့အကြုံကိုတံတားကြောင်းကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်သည်။
•သစ်ကို device များအတွက် UI ကိုတိုးတက်မှု
285.50 ကို MB